हालसम्म कति जनाको भयो कोरोना टेस्ट ? यस्तो छ विवरण - Lokpath Lokpath
२०७७, १० जेष्ठ शनिबार २३:००
हालसम्म कति जनाको भयो कोरोना टेस्ट ? यस्तो छ विवरण
प्रकाशित मिति : २०७७, १० जेष्ठ शनिबार २३:००
शनिबारसम्म पीसीआर विधिबाट ४५ हजार ९ सय ५७ जनाको नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ३ हजार ४ सय ९४ वटा नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट भएका छन् । आरडिटी विधिबाट आरडिटी ४ हजार १ सय १९ वटा परीक्षण भएका छन् ।
अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार ४ सय ६१, प्रदेश नम्बर २ मा ६ हजार ९ सय १०, बागमती प्रदेशमा ५ सय ३५ र गण्डकी प्रदेशमा ७ सय ७९ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ मा १७ हजार १ सय ३०, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ६ सय ७० र सुदूरपश्चिममा ४ हजार १ सय २ गरी देशभरी ३२ हजार ५ सय ८७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । हालसम्म आधिकारिक कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ५ सय ८४ रहेको छ ।
‘आगामी २ बर्ष भित्र नेपालको फिन्टेक इन्डष्ट्रिमा आमुल परिवर्तन हुनेछ’
काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रको सोचमा आएको परिवर्तन, प्रविधिमा भएको सुधार र नागरिकमा टेक्नोलोजीको
नेपालका ६५ जिल्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण, कुन प्रदेशमा कति छन् संक्रमित ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालको हालसम्म ६५ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । जसमध्ये प्रदेश
बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद् बैठक जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ । आजको बैठकबाट सरकारले